Momba anay - Dingzhou Toptons Sport Equipment Co., Ltd - Dingzhou Toptons Sport Equipment Co., Ltd.
Mifantoha amin'ny famokarana entana fanatanjahan-tena
Dingzhou Toptons Sports Product co., Ltd izay miorina amin'ny indostrian'ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena tanàna nahaterahana indostrian'ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena faritany bei.
Vokatra & Mechine
Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2008, mavesatra dumbbell famokarana matihanina ho an'ny orinasa atambatra ary manarona faritra 100000 metatra toradroa. Ny orinasa dia nametraka milina fanamafisam-peo elektrika fanala varnish fitaovana mandeha ho azy mba hamoronana tsipika famokarana maoderina electroplating iray.
Ny orinasanay dia mamokatra amin'ny ankapobeny ny karazan-dambbell dumbbell ary ny vokatray dia aondrana any Etazonia Canada Australia Russia Singapore Thailand Thailand sy ny firenena hafa.
Ding zhou zhong teng subo fanatanjahan-tena vokatra co., Ltd mampiditra fikarohana sy fampandrosoana famolavolana ny varotra famokarana amin'ny fanatsarana ny zava-baovao product.our orinasa amin'ny fanavaozana Fitness ny foto-kevitra ny fiarovana ny tontolo iainana.
Izahay amin'ny vokatra avo lenta ho an'ny tanjona hampiroboroboana ny foto-kevitra momba ny fiarovana tontolo iainana mahasalama Ny tena amin'ny zotom-po indrindra ny serivisy tonga lafatra indrindra ho antoka, manompoa ny fiaraha-monina miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny lafim-piainana rehetra mba hifanome tanana amin'ny famoronana ho avy salama.